ANDROID ပေါ်မှာ EXE-FILE ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အန်းဒရွိုက် - 2019
Android အတွက် EXE format နဲ့ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်
လုံးဝကျန်းမာမဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့၏အကျိုးဆက်များကိုမကြာခဏပြင်ပလူ့ form မှာထင်ဟပ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောညှို့အရက်သောက်ဘီယာမှာဓာတ်ပုံတွေတစ်စည်နဲ့တူကြည့်ရှုမည်အကြောင်း, ခါးအနည်းငယ်စင်တီမီတာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျနော်တို့အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောမှပုံထဲမှာသူ့ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချ, Photoshop မှာဗိုက်အဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာပါ။
ဒီမှာအစာအိမ်ဖယ်ရှားနှင့်တိုကျရိုကျရှေ့ဆက် bulges ကြောင့်ဤဓာတ်ပုံများ, ပြင်ပေးဖို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကတောက်တောက်နှင့်အရိပ်ဒေသများရှိပါတယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုမှသာဖြစ်ပါသည်ကြည့်ပါ။ အသုံးပြုသူရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအတွက်ပေါ်လာဝမ်းမှန်လျှင်, ရိုးရိုးစစ်ထုတ်ရန်နှင့်အတူ "ဆွဲထုတ်" "ပလတ်စတစ်", ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါမှသာရပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာကိုသင်ယူ: အဆိုပါ filter "ပလတ်စတစ်" Photoshop မှာ
filter ကို Liquify
နှစ်ဖက်စလုံးကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဘောင်းဘီ၏ waistband အထက်ပါဝမ်းဗိုက်၏ "ဖေးက" plugin ကိုသုံးစွဲဖို့ "ပလတ်စတစ်"တစ်ခု universal tool ကိုပုံပျက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Photoshop ကိုဖွင့်ပါဓါတ်ပုံအတွက်နောက်ခံအလွှာ Duplicate ။ အလျင်အမြန်ဤ action ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါတယ် CTRL + J ကို ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
plugin ကို "ပလတ်စတစ်" မီနူးကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်တွေ့နိုင်ပါသည် "Filter ကို".
အတူစတင်, ကျွန်တော်တစ်ဦး tool ကိုလိုအပ်ပါတယ် "ပုံပျက်သော".
အဆိုပါများအတွက် parameter သည် setting ကိုယူနစ် (ညာ) သိပ်သည်းဆ နှင့် ဝန်လေးသော ဖြီးထားတန်ဖိုးကို 100%။ အဆိုပါအရွယ်အစား Cyrillic ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်စတုရန်းကွင်းခတ်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူချိန်ကိုက်သော့ဖြစ်ပါတယ် "X" ကို နှင့် "Kommersant".
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ကျနော်တို့ကညင်ညင်သာသာအတွင်းပိုင်းမှပြင်ပကနေလှုံ့ဆော်ပေးဆွဲထုတ်။ ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြောင့်လိုင်းများအောင်မြင်ဖို့မပါဘူးဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမလုပ်မလုပ်ပါဘူးမစိုးရိမ်ပါနဲ့။
တစ်ခုခုမှားသွားလျှင်, plugin ကိုတစ်ဦး restore function ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးကိုခလုတ်ကကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်: "ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်"ဘယ်တစ်ဦးခြေလှမ်းကိုအကျောဆောင်တတ်၏, နှင့် "အားလုံး Reset".
အခုတော့ "ဖေး" ပါ။ ဒီ tool အဆင့်တူညီနေကြသည်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ , သင်အဝတ်အစားများနှင့်အစာအိမ်အကြားနယ်စပ်, ဒါပေမယ့်လည်းအထူးသဖြင့်အထက်တည်ရှိသောဒေသများသာမကပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းစိတ်ထဲအတွက်ခါးထားပါ။
Next ကိုခေါ်အခြားတူရိယာယူ "အရေးအကြောင်းတွေ".
သိပ်သည်းဆ ဖြီးထား 100%နှင့် အရှိန် - 80%.
အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန် bulge ကျွန်တော်တို့ကိုဟန်သောသူတို့ကိုနေရာများကိုကျင်းပအများအပြား။ ဒီ tool များ၏အချင်းတော်တော်ကြီးကြီးဖြစ်ရပါမည်။
ထိပ်ဖျား: ဥပမာ, ဧရိယာပေါ်ကလစ်၏ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်အားဖြင့်, ထိုတူရိယာ၏သက်ရောက်မှု၏အင်အားတိုးမြှင့်ဖို့မကြိုးစား: ကလိုချင်သောရလဒ်ဆောင်ကြဉ်းမည်မဟုတ်။
အားလုံးစစ်ဆင်ရေး၏ပြီးစီးပြီးနောက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ OK ကို.
ချောချောမောမောအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံဆွဲ - နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းဝမ်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် "Burn" နှင့် "Dodge".
ထိတွေ့မှု တစ်ဦးချင်းစီ tool ကို set ကိုများအတွက် 30%.
အဆိုပါ palette ရဲ့အောက်ခြေက icon ကိုစာရွက်အလွတ်ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သစ်တစ်ခုအလွှာကိုဖန်တီးပါ။
အဆိုပါညှိမခေါ် "ဖြည့်ပါ" ကီးဘုတ် shortcut ကို SHIFT + F5။ ဒီနေရာမှာဖြည့်ပါကိုရှေးခယျြ "50% မီးခိုးရောင်".
ဒီအလွှာများအတွက် blending mode ကိုပြောင်းလဲပစ်ရမည်ဖြစ်သည် "ဆော့ဖအလင်း".
အခုတော့ tool ကို "Burn" ဝမ်းဗိုက်၏အလင်းဒေသများမှတစ်ဆင့် loop, ပျေါလှငျအာရုံစိုက်နှင့် "ရှင်းလင်း" - မှောင်မိုက်၌။
သင်ခန်းစာတက် Sum ရန်။ ကအမြင်အာရုံ minimize လုပ်ဖို့လိုအပ်ဒါကြောင့်လူကိုကြည့်ရှုသူများ၏ညှနျကွားထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာ၏ "ပြူးလာပြီး" ရှေ့ဖမ်းမိသောဓာတ်ပုံများ Adjust ။ ကျနော်တို့ plugin ကို၏အကူအညီဖြင့်ထိုသို့ပြုကြသည် "ပလတ်စတစ်" ("အရေးအကြောင်းတွေ"), ထိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံစံချောမွေ့သည်။ ဒါကပိုလျှံငွေပမာဏကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Myanmar Zawgyi font for Google Chrome (နိုဝင်ဘာလ 2019).